Uphononongo lweeMarike zeBlueberry - i-0% yoRhwebo lweKhomishini nge-Leveraged CFDs - Funda ukuRhweba
Uphengululo lweeMakethi zeBlueberry- 0% yeKhomishini yoRhwebo ngeeCFD ezinamandla
Ukuhlaziywa: 1 May 2021
Ukuba ujonge iqonga elitsha lokurhweba kwi-Intanethi- unokuba ucinga ngeMarket yeBlueberry. Umrhwebi odumileyo kwi-Intanethi ukuvumela ukuba uthengise izikhundla zeCFD ezixhamliweyo kwizabelo, ii-indices, i-forex, izinto zorhwebo, nangaphezulu ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini.
Kwaye kunye neqonga lokurhweba lilawulwa kakhulu ngumzimba we-ASIC-ke ngoko ukhuseleko alunakuba yinkxalabo. Kodwa, ngaba iimarike zeblueberry zingumthengisi olungileyo we-Intanethi kuwe?
Kwesi sikhokelo, sijonga yonke into eyaziwayo malunga nayo Iimakethi zeBlueberry. Oku kugubungela iimetrikhi ezingqonge imirhumo kunye neekhomishini, iimarike ezithengiswayo, umda wokuphakamisa, umgaqo, iintlawulo kunye nenkxaso yabathengi.
Iimakethe zeBlueberry-Thenga kwaye utyalomali kwiiasethi
Ukwenza umbane ngokukhawuleza
Ikhomishini yeZero kwiakhawunti esemgangathweni
Ukurhoxiswa okungahlawulelwayo ngaphandle kweeyure ezingama-24
Ndwendwela iMarket Blueberry
Iimakethi zeBlueberry ngokufutshane
Awunalo ixesha lokufunda uphononongo olubanzi lweMarike yeBlueberry ngoku? Ukuba kunjalo, apha ngezantsi sichaza awona manqaku abalulekileyo esiwafumeneyo malunga neqonga lokurhweba kwi-Intanethi.
I-100% yokuthengisa ngaphandle kwentlawulo kuzo zonke iimarike
Isasazeka ukusuka ezantsi njengeepipi ezi-0
Iimakethi zibandakanya isitokhwe, ii-indices, i-forex kunye nezinto zorhwebo
Inkqubo yeakhawunti elula kunye nekhawulezayo kunye neendlela ezininzi zokuhlawula ezixhaswayo
Umiselwe ngumzimba we-ASIC
Ezi zinto zingasentla zodwa zibonisa ukuba kwibhodi yonke - Iimakethi zeBlueberry liqonga elilinganiswe kakhulu. Ngale nto ithethwayo, akukho babini babarhwebi bakwi-intanethi abafanayo- ke siyacebisa ukuba sifunde lonke uphononongo lwethu ukuqinisekisa ukuba iiMakethe zeBlueberry zikulungele.
Yintoni iimakethi zeblueberry?
Iimakethi zeBlueberry liqonga lokurhweba kwi-Intanethi elikuvumela ukuba uqikelele kwizixhobo zeCFD. Oku kubandakanya isuti epheleleyo yeeasethi ezidumileyo- ezinje ngestokhwe, ii-indices, i-forex kunye nee-cryptocurrensets. Njengoko uza kuthengisa ii-CFD, ungahamba ixesha elide okanye elifutshane kwintengiso oyikhethileyo.
Lo broker uphezulu akahlawulisi naziphi na iikhomishini zorhwebo- oko kuthetha ukuba yonke imirhumo yakhiwe ekusasazeni. Oku kuqala kwii-pips eziyi-0 ukuba ukwi-akhawunti 'ngqo' -kwaye kancinci ukuba ukwiakhawunti 'esemgangathweni'. Iimakethe zeBlueberry zaqala ukuqaliswa ngo-2016 kwaye sele zikhulile isiseko sabathengi bayo ngokukhawuleza.
Umrhwebi ulawulwa yi-ASIC- ke unokuqiniseka ukuba uthengisa kwindawo ekhuselekileyo. Ngokwamaqonga orhwebo, iimakethi zeBlueberry zinokufikeleleka ngeMT4 okanye ngeMT5. Oku kubandakanya indawo yokurhweba ngewebhu, isoftware yedesktop, kunye neselfowuni.
Yintoni onokuyithengisa kwiMarike yeBlueberry?
Njengoko sele kutshiwo apha ngasentla, iimakethi zeBlueberry zijolise ikakhulu kwiiCFD ezinamandla. Oku kuthetha ukuba ngekhe uthenge okanye uthengise iiasethi zemveli- ezinje ngezabelo okanye ii-ETFs. Endaweni yoko, uya kuba 'urhweba' ngeklasi ye-asethi yeCFD ngokucinga ukuba ixabiso liza kunyuka okanye lihle. Njengoko isixhobo esingasasebenziyo sezemali-oku kunika iiMakethe zeBlueberry inkululeko yokubonelela ngethala leencwadi elikhulu lempahla.
Stocks: Ngaphezulu kwama-50 + esitokhwe esikhulu esidweliswe kwi-NYSE nakwi-NASDAQ
IndiceIindidi ezili-11 + kubandakanya i-FTSE 100, i-S & P 500, iDow Jones, kunye neJPY 225.
Forex: Uninzi lwezibini ze-forex ezixhaswayo ezivela kwiindidi ezinkulu, ezincinci kunye nezingaqhelekanga zemali
Iimveliso: Igolide, isilivere, iplatinam kunye neoyile (i-WTI kunye neBrent Crude)
Njengoko ubona koku kungasentla, iiMarket zeBlueberry zigubungela ezona klasi zininzi zolwelo kunye nezorhwebo kwindawo yotyalo-ukuze ukwazi ukwahluka ngokulula.
Imirhumo yeBlueberry Market kunye neeKomishini
Ke ngoku ukuba uphononongo lweeMakethe zeBlueberry lubonakalisile ukuba umrhwebi ubonelela ngemfumba yeeasethi- ngoku kufuneka sixoxe ngezo ntlawulo zibaluleke kakhulu.
Masiliqhekeze isebe lemirhumo kancinci-kancinci ukuze ube nokuqonda okuqinisekileyo kulindeleke ukuba uhlawule.
Ukubeka ngokulula, iiMarike zeBlueberry liqonga lokurhweba elingahlawulwayo le-100%. Oku kuthetha ukuba xa ungena okanye uphuma kwintengiso - ngekhe kubekhona ntlawulo zorhwebo zithe ngqo zokuhlawula. Endaweni yokuba yonke into yakhelwe ekusasazeni- ngumahluko phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa ixabiso lesixhobo eso.
Njengamaxesha onke, ukusasazeka kuya kwahluka ngokuxhomekeka kwintengiso onqwenela ukuyithengisa. KwiMakethe yeBlueberry, ukusasazeka kuya kuxhomekeka kuhlobo lweakhawunti okhoyo.
Ngenxa yesayizi enkulu yelayibrari yeeasethi kwiiMakethe zeBlueberry - asinakudwelisa ukusasazeka nganye. Endaweni yoko, apha ngezantsi sichaza imizekelo embalwa ukuze ukwazi ukuziva ukhuphiswano lwalo broker.
YeEUR / JPY: 0.2 iipips
YeEUR / USD: 0.3 iipips
I-S & P 500: 5.3 iipips
igolide: 1.5 iipips
I-Brent Oil Oil: 4.4 iipips
Njengoko unakho ukusuka ngasentla, ukusasazeka kwiiMakethe zeBlueberry kuqinile. Ngapha koko, ukuba uvula i-akhawunti 'ngqo', unokufumana ukusasazeka kwakho ukuya kwiipips eziyi-0 kwizibini eziphambili zemali.
Iakhawunti yeBlueberry ngqo
Nangona siqaphele kumacandelo angentla ukuba iiMarket zeBlueberry zikuvumela ukuba uthengise ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini- oku kusekwe kwiAkhawunti eseMgangathweni. Kodwa, nangona kunjalo, unakho ukhetho lokuvula iAkhawunti ngqo yeBlueberry. Olu hlobo lweakhawunti lolona khetho lufanelekileyo onokuhamba nalo ukuba ungumrhwebi onamava obeka inani elikhulu lezikhundla.
Kungenxa yokuba uyakuxhamla ekusasazeni okuqala kwii-0.0pips. Emva koko, uya kuhlawula ikhomishini encinci ye- $ 7 kwisilayidi ngasinye. Kodwa, ukuba urhweba ngemithamo emikhulu, le khomishini ibonelela ngexabiso elikhulu. Ngokufana neAkhawunti esemgangathweni, idipozithi encinci kwiAkhawunti ngqo yi $ 100 nje.
Kuxhomekeka kwindlela oyikhethayo yokuhlawula, kungafuneka uhlawule umrhumo wedipozithi.
Jonga olu luhlu lungezantsi kwinto oza kuhlawuliswa ngayo ziiMakethe zeBlueberry
Ityala / Amakhadi etyala: SIMAHLA
Ukudluliswa kweBhanki / iWire SIMAHLA (kodwa jonga iifizi zebhanki yakho)
Intlawulo yePoli: 0%
I-China UnionPay: 0%
Xa kuziwa ekurhoxiseni, awuyi kuhlawuliswa nayiphi na imali. Kwiindaba ezingcono nangakumbi, iiMarket zeBlueberry ziya kuqwalasela isicelo sakho sokurhoxa ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Ngokweemali ezixhaswayo-iMakethi yeBlueberry ixhasa oku kulandelayo:
Ukuba, nangona kunjalo, ufuna ukufaka imali engadweliswanga apha ngasentla- oku kusenokwenzeka. Oku kuthetha nje ukuba uya kuhlawula umrhumo omncinci we-FX kwindawo yentengiselwano.
Ukuxhamla kwiiMakethe zeBlueberry
Mhlawumbi elinye lawona manqaku makhulu okusebenzisa iiMakethe zeBlueberry kukuba iqonga lithi bonke abathengi baya kunikwa amandla okufikelela kwi-1: 500. Oku kuthetha ukuba unokwandisa isibonda sakho ngomlinganiselo omkhulu wama-500x. Kananjalo, ibhalansi ye-akhawunti eyi- $ 300 inokukufikelela ngokulula kwi- $ 150,000 kwiimali zorhwebo.
Nangona kunjalo, phatha ngononophelo xa usebenzisa amanqanaba aphezulu okunyusa-ngakumbi ukuba usaqala. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba isikhundla sakho sichasene nepesenti ethile, urhwebo lwakho luya kupheliswa kwaye uya kuphulukana nesibonda sakho.
Amaqonga orhwebo amaBlueberry
Iimakethi zeBlueberry aziboneleli ngeqonga lokuthengisa lendalo. Endaweni yoko, umrhwebi ubambisene nabanikezeli benkampani yesibini ekhokelayo- iMetaTrader 4 (MT4) kunye neMetaTrader 5 (MT5). Oku kulungele abo bafuna ukufikelela kwizixhobo zokurhweba eziphambili. Emva kwayo yonke loo nto, zombini i-MT4 kunye neMT5 zipakishwe zizalathi zobuchwephesha kunye nezixhobo zokuzoba itshathi.
Kwaye, la maqonga eqela lesithathu akuvumela ukuba ufake kwaye uhambise irobhothi yokurhweba okanye ye-EA EA. Ungathengisa kwiimarike zeBlueberry ngeMT4 okanye ngeMT5 ngokusebenzisa umthengisi wewebhu weqonga okanye unokukhuphela isoftware kwisixhobo sedesktop. Ukwalanda usetyenziso lweMT4 / 5 kwaye uthengise ngefowuni yakho. Konke okufuneka ukwenze kukungena ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha lakho leBlueberry.
Ngaba iimakethi zeBlueberry zikhuselekile?
Ngamafutshane, akufuneki ubenenkxalabo malunga nokhuseleko xa usayina kunye neeMakethe zeBlueberry. Kungenxa yokuba umrhwebi ugunyazisiwe kwaye ulawulwa yiKhomishini yoKhuseleko kunye nezoTyalo-mali yase-Australia (ASIC).
Kulabo abangaziyo-ecaleni kwe-FCA (e-UK) kunye ne-SEC (i-US) -i-ASIC ngomnye wabalawuli abaziwayo kwezemali kwihlabathi liphela. Umnikezeli welayisensi uya kuqinisekisa ukuba iiMakethe zeBlueberry zilandela uluhlu lwezikhokelo kunye nemigaqo- njengokugcina imali yakho kwiiakhawunti zebhanki ezahluliweyo.
Ukuba ngesizathu esithile ubalekele kumcimbi weeBlueberry Markets- uhlala unenketho yokuthatha isikhalazo sakho ngqo kunye ne-ASIC.
Uphengululo lwethu lweeMakethe zeBlueberry lufumene ukuba iqonga libonelela ngenkxaso yabathengi abaphezulu. Ngapha koko, unokuthetha nearhente yenkxaso ngexesha lokwenyani ngokusebenzisa indawo yengxoxo ebukhoma. Oku kuqinisekisa ukuba awunyanzelekanga ukuba ulinde iiyure okanye neentsuku ukufumana impendulo kumbuzo wakho.
Uqala njani ngeeMarike zeBlueberry namhlanje
Ukuba ufundile uphononongo lweeMakethe zeBlueberry ukuza kuthi ga ngoku kwaye uyayithanda into oyibonayo-ngoku siza kukuhamba ngenkqubo yokuqalisa. Ngokulandela amanyathelo alula achaziweyo ngezantsi uya kuba neakhawunti evulwe kwimizuzu nje embalwa!
Njengabo bonke abarhwebi abakwi-Intanethi abalawulwa yi-ASIC- kuya kufuneka kuqala uvule iakhawunti ngeeMarike zeBlueberry. Yiya nje kwiphepha lasekhaya lomboneleli kwaye ucofe iqhosha 'lokuQala lokuRhweba'.
Uya kudinga ukukhetha kwi-Standard okanye kwi-Akhawunti ngqo - kwaye ulandele imiyalelo ekwi-screen ngokufaka iinkcukacha zakho kunye neenkcukacha zonxibelelwano.
Enye into efunekayo kwi-ASIC kubarhwebi abalawulayo kukuba bonke abarhwebi mabaqinisekiswe. Le yinkqubo elula kwiiMakethe zeBlueberry-njengoko ufuna kuphela ukufaka ikopi yakho:
ipaspoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba
ubungqina bedilesi- njengestatimenti se-akhawunti yebhanki okanye into oyisebenzisayo
Amaxwebhu akho aya kuhlala eqinisekiswa liqonga leeMakethe zeBlueberry kwimizuzu engaphantsi kwe-10.
Ngoku ungafaka imali kwiakhawunti yakho yeemarike zeBlueberry. Khetha uhlobo lokuhlawula olukhethiweyo kuluhlu lweendlela ezixhaswayo zedipozithi. Oku kubandakanya ukubhatalwa / amakhadi etyala, ucingo lwebhanki, kunye ne-e-wallets. Idipozithi encinci iyi- $ 100.
Inyathelo 4: Khetha iqonga
Ngoku kufuneka ukhethe iqonga lakho lokurhweba olithandayo. Iimakethe zeBlueberry zixhasa iMT4 kunye neMT5.
Ungasebenzisa iqonga lakho olithandayo ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yeMakethe yeBlueberry. Ngenye indlela, unokufikelela kwiakhawunti yakho ngesoftware yedesktop yeMT4 / 5 kunye nesoftware.
Isinyathelo 5: Qala ukuThengisa
Ngoku umiselwe ngeakhawunti yorhwebo yeMarike eBlueberry egcwele ngokupheleleyo. Konke okufuneka ukwenze ngoku kukuqalisa ukurhweba. Unokufumana intengiso oyithandayo okanye iasethi ngokusebenzisa ibhokisi yokukhangela.
Emva koko, kuya kufuneka usete iodolo. Oku kuyakufuna ukuba ukhethe kwi-oda yokuthenga / yokuthengisa kunye nokuthengisa / yokunciphisa umda-kwaye ungene kwisibonda sakho. Unako ukuseta ukulahleka kokuyeka kunye nokuthatha inzuzo.
Qinisekisa indawo yakho yokubeka urhwebo lwakho lwasimahla ngaphandle kwemakethi eBlueberry!
Uphengululo lweeMakethe zeBlueberry-Sisigqibo?
Isishwankathelo, uphononongo lwethu lweeMakethe zeBlueberry lufumene ukuba le broker elawulwa yi-ASIC yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokurhweba kwimarike ngoku.
Ayisiyiyo kuphela into yokuba urhwebe iimfumba zezixhobo zemali ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini, kodwa ukusasazeka kunqabile. Ngapha koko, ukuba ukhetha ukuvula iAkhawunti ngqo - ezinye iimarike ziza nokusasazeka kwee-0.0pips.
Ngaba iimarike zeblueberry zingumthengisi olungileyo?
Iimakethi zeBlueberry zikhathaza zonke iibhokisi ezixineneyo. Iqonga lilawulwa yi-ASIC, libonelela ngeemarike ngaphandle kwekhomishini, kwaye idipozithi encinci yi- $ 100 nje. Kwaye iqonga liyahambelana neMT4 kunye neMT5.
Ngaba iimarike zeblueberry zilawulwa?
Ewe-Iimakethi zeBlueberry zilawulwa yiKhomishini yoKhuseleko kunye nezoTyalo-mali yase-Australia (ASIC). Umlawuli yenye yezona zidumileyo kwindawo yokurhweba kwi-Intanethi.
Ngaba ungazisebenzisa iimakethi zeBlueberry eMelika?
Ngelishwa, iimakethi zeBlueberry azifumaneki kubarhwebi baseMelika- njengoko umrhwebi ebonelela ngeeCFD.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezamkelwa ziiMarket zeBlueberry?
Iimakethi zeBlueberry zikuvumela ukuba ubeke kwaye urhoxise imali ngedebhithi / ikhadi lekhredithi, i-e-wallet, okanye ucingo lwebhanki.
Ufumana malini ubungakanani boMakethi weBlueberry?
Iimakethe zeBlueberry zithi zibonelela nge-1: 500 kubo bonke abathengi. Kodwa, kuya kufuneka ukhumbule ukuba umda wokulinganisa unokubanjiswa ngokuxhomekeke kwilizwe ohlala kulo. .